Fikarohana momba ny firaisana Tantaram-piainana Tantaram-piainana tamin'ny alalan'ny fanombohana ny fanahy avy amin'ny trangan'ny fanambadiana ara-panahy ao amin'ny Reincarnation Spirit of Felix Fresnel | Christophe Albret - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tantaram-piainana Tantaram-piainana miaraka amin'ny fanorenana fanahy avy amin'ny raharaha momba ny fanambadiana ara-panahy ao amin'ny Revelarnation Spirit of Felix Fresnel | Christophe Albret
Fomba fiaina: Fifandraisana, fifandraisana amin'ny fanahy
Mpikaroka: Dr. Maurice Delarrey
Avy amin'ny: La Revue Spirite sy Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Fifandraisana ara-panahy amin'ny alàlan'ny Birao Ouija
Ity tranga ity dia nitranga tao amin'ny 1924 tany Frantsa ary misy ny Dr. Maurice Delarrey sy i Jeanne vadiny, izay ny anarany vavy dia Boileau. Nanandrana izy ireo tamin'ny iray Ouija board ary nanomboka nahazo fifandraisana izay noheverin'izy ireo fa hafatra tena avy amin'ny tontolon'ny fanahy.
I Jeanne izay nampiasa ny filankevitra Ouija ary toa tsy mahafantatra izay hafatra nosoratany izy, araka ny nosoratan'i Dr. Delarrey fa raha nampiasa ny birao ny vadiny, dia afaka nifampiresaka tamin'ny olona tamin'ny lohahevitra rehetra izy mandritra izany fotoana izany.
Hitanay ny fampiasana ny biraon'i Ouija ho toy ny karazam-pampahalalam-baovao, izay misy ny fanahy mametraka ny tànan'ny fitaovana hanamboarana hafatra.
Felix Fresnel dia mampiseho ny tenany amin'ny tontolon'ny fanahy
Indray andro, ny anaran'i Felix Fresnel dia nambara teo amin'ny solaitrabe. Dr. Delarrey dia tsy nahatsiaro na iza na iza tamin'ny anaran'io anarana io, fa ny vadin-tsika dia nahatsiaro fa ny rainy dia manana mpanompo avy amin'io anarana io, izay nampiasain'ny rainy tany Renage nandritra ny folo taona. Felix dia efa maty 20 taona talohan'io, teo amin'ny 1904. Dr Delarrey no nanontany hoe:
"Moa ve ianao tamin'ny fotoana nampiasan'ny fianakaviana Boileau tao amin'ny tanàna Renage?" (1)
Tonga avy hatrany ny filankevitra Ouija. Nahatsiaro an'i Felix Fresnel avy eo i Jeanne avy eo ary nahatsiaro fa nanana toetra tsy mahazatra teo amin'ny sofina havanana mahitsy izy, izay nibosesika hatrany am-piandohana, ary toy ny sofin'ny pila.
Rehefa nandeha ny solo-n'i Ouija, ny fanahin'i Felix Fresnel dia toa nanjary nihanazatra kokoa tamin'ity karazana fifandraisana ity, toy ny hoe nandeha tamin'ny dingana fianarana izy. Tamin'ny fotoana fahenim-bolana taorian'ny nanoratan'i Felix voalohany ny anarany, dia nisy fihaonana tena nahomby.
Fandaminana fanahy avy amin'ny tontolon'ny fanahy: nanambara i Felix hoe aiza sy rahoviana izy no hateraka indray
Tamin'ity fivoriana ity niaraka tamin'ny filankevitra Ouija, izay nitranga tao amin'ny May 1924, dia nolazain'i Felix tamin'ireo mpivady fa hiverina ao amin'ny fianakaviany indray izy. Rehefa nanana fianakaviana be dia be ny Delarrey izay niely patrana ara-jeografika, dia nanontany an'i Felix izy ireo raha toa ka mety ho voafaritra kokoa.
Nanoro hevitra azy ireo i Felix fa ho teraka ao Peyron izy. Ny Delarreys dia nanana havana tanora tany Peyron antsoina hoe Albret ary nanontany izy ireo raha izy ireo no mpivady tian'i Felix holazaina. Notsipin'i Felix hoe "eny," ary nahagaga fa nomeny ny anarany voalohany, ny taonany marina ary nomarihiny fa efa manan-janaka roa vavy izy mivady, izay marina daholo.
Rehefa nanontany an'i Felix izy ireo raha fantany ny daty nahaterahany, dia namaly izy hoe:
"Eny, September 24, maraina." (2)
Nanamarika izy mivady fa mety ho tsara amin'ny faminaniany fotsiny i Felix. Ahoana no hahalalan'izy ireo fa ny zaza dia ho azy fa tsy olon-kafa? Felix namaly hoe:
“Hahafantatra ahy mora foana eo imasoko i Miss Jeanne.” (3)
Ny an'ny Delarrey dia tsy nahalala raha miandry zazakely i Albrets. Raha ny 24 septambra no daty voatondro, araka ny natoron'i Felix, dia tamin'ny fotoana nanatanterahana ity fivoriana ity dia tokony ho bevohoka 4 na 5 volana Ramatoa Albret. Nanapa-kevitra izy ireo fa tsy handray andraikitra ary hiandry izay hahitana izay hitranga.
Fikolokoloana fanahy: Tanteraka ny faminaniana nataon'i Felix momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Tamin'ny volana 24, 1924, ny andro nitenenan'i Felix, dia nahazo antso an-tariby avy amin'ny Albrets ny Delarrey izay nanambarany ny nahaterahan'i Christophe zanany. Ny Katolika dia ny Katolika Romanina ary ny Dr. Delarrey dia tsy nieritreritra ny hampahafantatra azy ireo ny fanandraman'izy ireo tamin'ny biraon'i Ouija na ny faminanian'i Felix. Tsy te hanohitra ny rafi-pinoana i Dr. Delarrey.
Christophe, ilay teratany vaovao indray i Felix Fresnel, dia manaiky an'i Jeanne Delarrey
Telo volana taty aoriana dia nasaina hamonjy fivoriam-pianakaviana ny Delarreys izay natao tao an-tranon'i Albret tao Peyron. Tamin'ity fihaonana ity dia nanamarika ireo ray aman-dreny vaovao fa mikorontana sy mitomany ny zanany vao teraka, toa sahiran-tsaina noho ny isan'ny olona vaovao tamin'io hetsika io.
Nentina tany amin'ny efitranon'ny zazakely ireo jiolahimboto. Andeha isika hamela ny Dr. Delarrey hilaza ny zava-misy:
"Niditra tao amin'ilay efitrano izay nisy ilay zazakely izahay. Raha vantany vao tonga teo akaikin'ny vatam-bary ny vadiko, dia nanomboka nitsiky ilay zaza, na dia mbola nitomany aza ny ranomaso; ary naninjitra ny tànany kely roa tamin'ny vadiko izy, izay nitondra azy teny an-tsandriny.
Naninjitra ny tanany roa izy ho an'ny vadiko, izay nitondra azy teny an-tsandriny. Toa faly sy miezaka izy-toy ny zazakely kely iray-afaka manetry zavatra. Rehefa nahita izany ilay renim-pianakaviana dia hoy izy: 'Jereo! Mety ho nieritreritra ianao fa nahafantatra anao izy. '
Taorian'ny fandokafana mahazatra dia hoy aho tamin'ilay tanora havany: 'Fa inona no anaovan'ilay fehy amin'ny lohany? Manana karazana ratra izy? '
'Tsia,' hoy izy, 'Tsy inona izany. Ny zavatra mahantra dia tsy maintsy ho teo amin'ny toerana ratsy tao amin'ny vatako. Teraka tamin'ny sofiny havanana izy.
Milaza ny dokotera amintsika fa amin'ity fanakonana ny sofina ity dia hitombo ara-dalàna. Afaka volana vitsivitsy dia tsy hisy zavatra ho hita intsony. '”(4)
Ity toe-javatra mampiavaka ny vatana vaovao ity, raha manaiky, dia maneho ireto zavatra manaraka ireto:
Avy amin'ny fanjakan'ny fanahy, fanombohana ny Fahatongavana ho nofo ho velona avy amin'ny fanahy: Tena nirotsaka i Felix tamin'ny famolavolana ny fomba fiainany ho avy, nifidy ray aman-dreniny ary nahalala ny daty sy ny toerana nahaterahany. Fantatr'i Felix mihitsy aza fa tsy mety ny sofiny, toy ny nataony teo aloha.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ity tranga ity dia azo jerena ihany koa amin'ny raharaha momba ny fanambadiana ao an-tokantrano, izay nisy fianakaviana mpanompo efa ela, amin'ity raharaha ity, Felix Fresnel, dia niorina indray tao anatin'ny fianakaviana iray izay nanompoany taloha. Izany dia mahatonga ny olona iray hahafantatra fa tsara ny mitondra tsara ny mpanompon'ny fianakaviana.
Mariho fa nitranga tao 1924 io tranga io, nefa tsy navoaka hatramin'ny 1948. Nanazava i Dr. Delarrey fa ny fahatarana dia nitranga rehefa nanohitra tanteraka ny fianakavian'i Albert ny fitaterana ity tranga ity, satria mifanohitra amin'ny finoany Katolika. Rehefa navoaka ilay izy dia tsy nambara ny anaran'ny fianakaviana. Ian Stevenson, araka ny fitantarany, dia nanome ny zaza ny anaran'i Christophe Albret ho solon'anarana.
Trano fikarohana momba ny Reynenarnation
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 42
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 43
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 43
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana virijiny, McFarland, 2003, pejy 43-44